ओली नायक की खलनायक ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ओली नायक की खलनायक ?
चलचित्रमा देखिने हिरो अथवा नायक मुलतः दुईवटा प्रवृतिको हुन्छ । पहिलो चलचित्रकी होरोइन नायीकालाई भिलेनबाट बचाउने र पछि आफ्नै बनाउने । दोस्रो समाजमा देखिएका कुसस्कार, भ्रष्टाचार र विकृति हटाउने समाज सुधारको अभियान थाल्ने । चाहे हिंसा नै गर्न किन नपरोस ।
पछिल्लो समय समाजसुधारसँग जोडिएको हिरो बढी रुचाइएको छ । भिलेन आम दर्शकको रुचीमा पर्दैन तर चलचित्रलाई रोचक र आगामी समयको जिज्ञासा जगाइ राख्ने काम त्यही भिलेन गर्छ ।
‘ज्यान जाला संसोधन हुन्न’ शैलीमा आएका ओलीका बोलीले उनी संविधान संसोधन विरोधी नेता हुन । मधेसी मोर्चाले भने जस्तो मधेस विरोधी नेता हुन । बोलीमा उनी त्यस्तै सुनिएका छन् । तर आफु प्रधानमन्त्री भएका बेला संसोधन किन अगाडी बढाए ?
मुलुक अहिले स्थानिय तहको चुनावमा उन्मुख छ राजनीतिक बहस संविधान संशोधनमा केन्द्रित छ । राजनीतिक चलचित्र तयार गर्ने शैलीमा बहसहरु भइरहेका छन् । राजनीति केन्द्रमा एमाले र मधेसी मोर्चा जोडिएका छन् । एमाले ‘भर्सेज’ मोर्चा शैलीमा बहस गाउँका चियापसल सम्म तातेको छ । सिंगो एमाले भन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहसको केन्द्रभागमा देखिन्छन् । अहिलेको राजनीति घटनाक्रमले उसो भए ओली हिरो की भिलेन ? के देखिदै घटनाक्रम हेर्दा ।
एमाले मेचीमहाकाली अभियानमा छ । चुनावसँगै राष्ट्रियतालाई अगाडी र संविधान संसोधत्रनलाई पछाडी राखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मधेसी मोर्चाले अभियानलाई छेक्न खोज्दा सप्तरीमा ५ जना राजनीतिमा सक्रिय नभएका युवा मारिए । त्यसयता मधेसी मोर्चा भर्सेज एमाले झन स्थापित गर्न खोजिएको छ । तर त्यसलाई चिर्न ओलीले हरेक अभियानका आमसभामा मधेसी, थारु समुदायलाई स्थापित हुनेगरि ठाउँ दिन थालेका छन् । स्थानिय तहको चुनावमा ओली ‘हिरोको इन्ट्री’ गर्न खोजिरहेका छन् । उनको मुद्दा अहिले पनि राष्ट्रवाद छ । ‘भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका बारेमा एमाले कसैसँग सम्झौता हुन्न’ बिहीबार कैलालीमा मेचीमहाकाली अभियान सकिदैगर्दा उनले भनेका छन् । संविधान संसोधनका मुद्दामा ओली एकातिर बाँकी राजनीतिक शक्ति अर्कोतिर उभिएको छ । तर ओलीलाई त्यसबाट हल्लाउन सकिएको छैन । ‘ज्यान जाला संसोधन हुन्न’ शैलीमा आएका ओलीका बोलीले उनी संविधान संसोधन विरोधी नेता हुन ।
मधेसी मोर्चाले भने जस्तो मधेस विरोधी नेता हुन । बोलीमा उनी त्यस्तै सुनिएका छन् । तर आफु प्रधानमन्त्री भएका बेला संसोधन किन अगाडी बढाए ? ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर कांग्रेसको साथमा लागेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मधेसी मोर्चाको मुद्दा समटेर भारतलाई पनि खुसी पारेर निकासको नायक बन्न खोजेका थिए । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संसोधन रोकेर ओली खलनायक बनिरहेका छन् । के उनी सधै खलनायक नै बनिरहरने हुन ? एमाले नेताका भनाईमा ओली संसोधनका विरोधी होइनन । तर अहिले संसोधन ठीक समय नभएको भन्दै सिंगो एमालेलाई त्यही लाइनमा उभ्याएका छन् ।
उनले नेतृत्व गर्दा मधेसका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएका थिए, विकासमा मधेसलाई कायापलट गर्ने ? उसो त देशलाई नै कायापलट गर्ने उनले थुप्रै सपना पनि बाडे । सपना सपना नै भयो विपनामा ओलीले कुर्सी छाड्नु पर्यो । अब ओली त्यसकै तुस मेटाउन चाहान्छन् र आबश्यक नेता बन्न खोजिरहेका छन् । तत्काल संसोधन रोकेर चुनावपछि समिकरण बदल्ने र त्यही सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्वोधन गर्ने लाइनमा उभिएका छन् । राजनीति आफुतिर केन्द्रति गर्न खोजेका छन् । उनको अडानले एकहदसम्म उनले चाहेकै बाटोमा प्रचण्ड पनि तानिदै छन् । अडान त ओलीले लिए तर समाधानको विकल्प भने जनताले बुझ्ने गरि दिन सकेका छैनन ।
अहिलेसम्म मधेसी मोर्चाको बुझाईमा उनी पूर्ण खलनायक हुन । माओवादी र कांग्रेसको बुझाईमा उनी खलनायको भूमिकामा देखिन खोज्दैछन् । एमालेलाई समर्थन गर्ने नागरिकको बुझाईमा उनी राष्ट्रियताको मुद्दालाई अगाडी सारेर नायक बन्ने बाटोमा छन् । वास्तवमा उनी हुन चै के नायक या खलनायक ? एमालेका एक नेता भन्छन् ‘त्यसको पुष्टि हुन प्रदेशसभाको निर्वाचन कुर्नपर्नेछ । ’ राजनीतिक ब्यबहारमा परिवर्तन, समाधानको केन्द्र र बोलीमा केही लगाम लगाउने हो भने उनी राजनीतिक नायक बन्न भने सक्नेछन् ।